Powder Orlistat manta (96829-58-2) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Ny vovo-dronono Orlistat dia fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana matavy loatra. Ny asany voalohany dia ny fisorohana ny fidiran'ny tavy amin'ny sakafon'olombelona….
Ordoat roila Orlistat (96829-58-2) video
Ny vovo-dronono Orlistat dia ao amin'ny kilasy fanafody antsoina hoe «lipase inhibitors» izay miasa amin'ny fanakanana ny fandraisana ny 25% ny tavy ao anaty sakafo ary ampiasaina amin'ny fihenan'ny lanjan'ny olon-dehibe matavy loatra, 18 taona no ho miakatra, rehefa ampiasaina miaraka amin'ny calorie mihena sy sakafo ambany tavy. Ny vovo-dronono Orlistat dia fanafody natao hitsaboana fiterahana. Ny asany voalohany dia ny fisorohana ny fidiran'ny tavy amin'ny sakafon'olombelona, ​​amin'izay hampihena ny fihinanana kaloria. Ny vovo-dronono Orlistat dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny lipase pancreatic, anzima iray izay mamotika triglycerides ao amin'ny tsinay. Raha tsy misy an'io anzima io, ny triglycerides avy amin'ny sakafo dia voasoroka tsy hydrolyzed ho asidra matavy maimaimpoana azo esorina ary esorina tsy misy poizina. Ny vovon-tsavony Raw Orlistat dia ampiasaina amin'ny olona matavy loatra izay mety manana tosidra ambony, diabeta, kolesterola avo na aretim-po. Ny fahombiazan'ny vovo-dronono Raw Orlistat amin'ny fampiroboroboana ny fihenan'ny lanja dia azo antoka fa maotina. Ny angon-drakitra voaangona avy amin'ny fitsapana ara-pitsaboana dia manome sosokevitra fa ny olona nomena vovo-dronono Raw Orlistat ho fanovana ny fomba fiaina, toy ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena, dia mihoatra ny 2-3 kilao (4.4-6.6 lb) mihoatra ny tsy mihinana fanafody mandritra ny herintaona. Ny vovo-dronono Orlistat ihany koa dia mampihena ny tsindry amin'ny tosi-drà ary toa misoroka ny fiandohan'ny diabeta karazana 2, na amin'ny fihenan'ny lanjany na amin'ny vokatra hafa. Mampihena ny trangan'ny diabeta karazana II amin'ny olona matavy loatra amin'ny habetsaky ny fiovan'ny fomba fiainana.
Rohamena Orlistat (96829-58-2) Taratasy
Product Name Or powdery Orlistat
Anarana simika Tetrahydrolipstatin, 1-((3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl)dodecyl-2-formamido-4-methylvalerate
Drug Class lipase inhibitors
molekiolan'ny Formula C29H53NO5
molekiolan'ny Wvalo 495.745 g / mol
mitsonika Point <50 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Miorina amin'ny angon-drakitra voafaritra, ny antsasaky ny vovobony Raw Orlistat dia miompana amin'ny 1 hatramin'ny ora 2.
Storage Temperature fitahirizana temp. 2-8 ° C
Application Ampiasao mba hanatrarana ny rongony.
Rao Orlistat poana (96829-58-2) Description
Ny Orsa Powder Orlistat dia ao anatin'ny kilasin'ny fanafody antsoina hoe inhibitors amin'ny lipase izay miasa amin'ny fanakanana ny famoahana ny 25% ny siramamy ao amin'ny sakafo ary ampiasaina amin'ny fahaverezan'ny lanja amin'ny olon-dehibe be loatra, 18 taona na mihoatra, rehefa ampiasaina miaraka amin'ny kaloria sy sakafo matavy loatra.
Ny vovony Orlistat Raw dia zava-mahadomelina natao hiarovana ny vatana. Ny asany voalohany dia misakana ny fihinanana tsaramaso avy amin'ny sakafo fihinan'ny olombelona, ​​ka hampihena ny fihinanana kalorie. Vokatry ny ravina Orlistat dia manakana ny fanavahana ny pancreatic, ny enzyme izay mamoaka triglycerides ao anaty tsina. Raha tsy misy io biby io, dia tsy afaka ny hodiovina amin'ny asidra matavy be loatra ny triglycerides avy amin'ny fihinanana sakafo, ary tsy voavonjy. Ny Orsa Powder Prescription Oroka dia ampiasaina amin'ny olona be loatra izay mety ho voan'ny aretin-koditra, diabeta, kolesterola avo, na aretim-po. Ny fahombiazan'ny vovobony Raw Orlistat amin'ny fampiroboroboana ny fatiantoka dia fombafomba fa maotina. Ny angona azo avy amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana dia milaza fa ny olona nanome ny vovo-dronono Raw Orlistat, ankoatra ny fanovàna fomba fiaina, toy ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena, dia mahatratra ny kilao 2-3 (4.4-6.6 lb) noho ireo tsy mandray ny zava-mahadomelina mandritra ny herintaona. Vokatry ny tsimokaretina Orlistat dia manamaivana ny tosidran'ny tosidra ary manakana ny fanombohan'ny karazana 2 karazany, na amin'ny fahavoazana mavesatra na ny vokany hafa. Izany dia mampihena ny lozan'ny diabeta II II amin'ny olona izay manadino ny habetsaky ny fiovan'ny fomba fiainana.
Orlistat vovoka (96829-58-2) Mechanism of Action
Orlistat vovoka dia karazana lipase manakana ny fihenan-danja amin'ny alikaola ary avy amin'ny lipostatin hydrated. Ny Orlistat dia mahasakana ny lipase vavony sy ny lipase pancreatic, nefa tsy misy fiatraikany amin'ny anzima fandevonan-kanina hafa (toy ny amylase, trypsin ary chymotrypsin) ary amin'ny phospholipase, ary tsy misy akony amin'ny fidiran'ny gliosida, proteinina ary fosfolipida. Ity zava-mahadomelina ity dia tsy voadoka na dia ny lalan-drà amin'ny gastrointestinal ary misy vokany manakana amin'ny lipase. Orlistat dia manafoana ny anzima amin'ny fatorana covalent amin'ny reside serine amin'ny toerana mavitrika amin'ny vavony sy ny lipase pancreatic. Izany dia manakana ny tavy amin'ny sakafo tsy ho vaky ho asidra matavy maimaim-poana sy diacylglycerol, noho izany dia tsy azo entina, mampihena ny fihinanana calorie ary mifehy ny lanjan'ny vatana. Ity fanafody ity dia tsy mila entin'ny vatana iray manontolo vao misy vokany. Ny hetsika ara-panafody Orlistat dia miankina amin'ny doka: fatra fitsaboana Orlistat (120mg / d, tid, nalaina sakafo), ampiarahana amin'ny sakafo ambany kaloria, dia afaka mampihena hatramin'ny 30% ny fitrohana tavy. Tamin'ny fandinihana ny fampitahana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ara-dalàna sy matavy loatra, Orlistat tamin'ny ankapobeny dia tsy nalenten'ny vatana mihitsy ary nanana fiakaran'ny rà tena ambany. Taorian'ny fatra tokana am-bava (800mg ny lehibe indrindra), ny tsiranon'ny Orlistat ao anatin'ny 8 ora manaraka dia <5 ng / ml. Matetika, ny fatra fitsaboana Orlistat dia voafehin'ny vatana kely ary tsy hangonina ao anatin'ny fotoana fohy. Tamin'ny andrana in vitro, ny tahan'ny fatorana Orlistat niaraka tamin'ny proteinina serum hafa dia nihoatra ny 99% (proteinina voafatotra dia lipoproteins sy albumin no betsaka indrindra), ary ny tahan'ny mamatotra azy dia manana sela mena mena dia ambany dia ambany.
Benefits amin'ny vovo Orlistat (96829-58-2)
▪ Orlistat dia mampihena ny habetsaky ny vatana mihoatra ny 20% amin'ny fandaniana ny tavy amin'ny vatana
▪ Manampy anao hahay hanisa kaloria i Orlista
▪ Orlista dia manome anao fahatsapana fiadanam-po
▪ Orlista dia misy valiny tsara manome fahatokisana sy fifaliana ho an'ireo mpampiasa
▪ Orlista dia manome valiny maharitra maharitra
▪ Orlista dia mampihena ny maha-matotra ny aretina toy ny fihenan-tsaina, diabeta, atherosclerosis ary
Recommended Orlistat vovoka (96829-58-2) Dosage
Ny dosilin'ny Orlistat dia vinaingitra 120-mg isa intelo isan-andro miaraka amin'ny sakafo maina rehetra misy tavin-kena (mandritra ny ora na amin'ny 1 ora aorian'ny sakafo). Ny dose avoakan'ny 120 mg isan'andro isan'andro dia tsy hita fa manome tombony fanampiny.
Ny olona dia tokony hihinana sakafo ara-boajanahary sy mihinam-panafody izay misy manodidina ny 30% ny kaloria amin'ny tavy. Ny fizarana isan'andro amin'ny siramamy, fiterahana, ary proteinina dia tokony hizarana sakafo telo lehibe. Raha misy sakafo na tsy misy fatana tsindraindray dia azo omena ny vodin'ny Orlistat.
Satria ny vovo-dronono Orlistat dia naseho mba hampihenana ny fidiran'ny vitamina malemy tavy sy betacarotene, ny olona dia tokony hotoroana hevitra mba handray multivitamin misy vitamina malaky tavy mba hiantohana ny sakafo mahavelona. Ankoatr'izay, ny fanampin-tsakafo vitaminina dia tokony ho raisina farafahakeliny 2 ora alohan'ny na aorian'ny fitantanana vovo-dronono Orlistat, toy ny amin'ny ora fatoriana.
Ny voka-dratsin'ny vovo Orlistat (96829-58-2)
Ara-dalàna raha mahamarika ny voka-dratsin'ny Orlistat rehefa ampiasanao izany. Mety misy ny fiantraikany eo amin'ny fiantraikany na tsia amin'ny fitsaboana hafa. Ny ankamaroan'ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana ny vovo-dronono Orlistat dia mifandraika amin'ny fomba fiasa ao amin'ny rafi-pandaminana. Matetika izy ireo no mazàna ary mandeha matetika rehefa manomboka ny fitsaboana. Mitranga ihany koa izy ireo rehefa avy nihinana sakafo matavy be. Soa ihany, ny ankamaroan'izy ireo dia lasa lavitra satria mitohy ny fitsaboana ary aorian'ny fanarahana ny sakafo ara-dalàna.
Ireto manaraka ireto dia misy fiantraikany mahazatra:
▲ Fihetseham-batana / fanadalana
▲ Fandevenana oliva
▲ Toby fetsy
▲ Mangirifiry malefaka
▲ Marary lamosina
Ankoatr'izay, raha mandalo amin'ny iray amin'ireo zava-manan'aina ireo ianao dia tokony hitondra azy ho toy ny vonjy taitra ary miantso ny dokotera avy hatrany. Izy ireo dia;
▲ Ny fanaintainan'ny alahelo mafy dia mafy tsy mandeha.
▲ Hives na hikolokolo be loatra
▲ Hatsikana ny fahasimbana
▲ Ny fihenan'ny fahasalamana
Rojo MT2 (Melanotan-II) vovoka (121062-08-6)